Guddoomiyaha Ururka Siyaasadeedka NDB oo ka hadashay qorsheyaasha ururkoodu u hayo bulshada | FooreNews
Home wararka Guddoomiyaha Ururka Siyaasadeedka NDB oo ka hadashay qorsheyaasha ururkoodu u hayo bulshada
Guddoomiyaha Ururka Siyaasadeedka NDB oo ka hadashay qorsheyaasha ururkoodu u hayo bulshada
fooreJan 28, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)-Guddoomiyaha urur siyaasadeedka NDB Marwo Foosiya Yuusuf Xaaji Aadan, ayaa tafaasiil ka bixisay qorsheyaasha ururkaasi u hayo bulshada ee ay kula tartamayaan ururada kale iyo xisbiyadii hore u jiray.
Marwo Foosiya Yuusuf Xaaji Aadan Qabile, waxa kale oo ay sheegtay in ururkeedu inta badan uu furtay xafiisyadiisii gobolada dalka, inta u dhimanna ay si dhakhso ah u furi doonaan.
“Dhamaan xafiisyadii Hargeysa ee ururkayagu way furan yihiin, waxa kale oo noo furan xafiisyadii Ceerigaabo , Gabiley waxaanu ku rajo weynahay in aanu maalinta Axada ah aanu furano, waxaa noogu xiga in xafiiskii Booramena wiigan ayaanu furaynaa Isha Allaa. Intaasi ka dib waxaanu gobolada bariga dalka ka soo furaynaa xafiiskii Ururka NDB,”ayay tidhi Marwo Foosiya Yuusuf X. Aadan, oo waraysi gaar ah siisay wargeyska DAWAN.
Marwo Foosiya oo aanu weydiinay awooda ay u leedahay inay daboosho dhaqaalaha ku baxaya urur siyaasadeedka ay ku dhawaaqday waxaanay tidhi “Haa haa waanu u soo diyaar-garoobnay, wax kasta oo la qabanayana Waxaa loo sameeyaa si niyad ah. dhibaatadu ma sahlana oo run ahaan urur yar oo cusub oo la tartamaya xisbiyo ay qaarkood jireen illaa 12 sanadood, hadana anagu waxaanu ku kalsoonahay isbedelka aanu anigu wadanka ka rabno isu diyaarino waxaanan ku rajo weyn nahay in ururku ku guulaysto doorashada Goleyaasha deegaanka ee fooda inagu soo hays oo aanu noqono sadexda urur ee u soo baxa heer xisbinimo.”
Guddoomiyaha oo ka jawaabayay su’aal ahay waxa ururkoodu kaga duwan yahay ururada kale, waxaanay tidhi “NDB marka u horeysa sida ka muuqata magaciisa waxa uu u taagan yahay Nabad Dimuquraadiyada iyo Barwaaqo , intaa marka laga yimaado, waa ururka kaliye ee gabadhi madax ka tahay. Waana ururka kaliya ee qofka madaxda ka ah ay bulshadu markhaati ka tahay, waxqabadkeeda haddii ay Jaamacado tahay oo dalka iyo dadka waxtaraya hore u soo qabtay.”
“Haddii ay bulshadu wax rabto fili maayo in cid nagula tartami kartaa jirto hogaanka dalka, waxa jira oo aanu diyaarinay qorsheyaal dhaadheer oo shan sano iyo ka badan ah, oo ku saabsan dhinacyada Tacliinta,caafimaadka, deegaanka, shaqo abuurka oo ah waxa noogu muhiimsan inaanu ka shaqeyno dhalinayarada suuqyada taagan aanu u abuurno shaqooyin,”ayay tidhi Guddoomiyaha Ururka NDB.
“Marka u horeysa waxaanu awooda saaraynaa waa dumarka oo aanu rabno inay oogaadaan in ay gaadhi karaan masuuliyada ilaa halka ay ka doonayaan, waxaa kale oo aanu rabnaa in ay fahmaan in aanay diintu ka hor joogsanayn siyaasadda. culimo badan baan ka dooday mana jirto wax dumarka u diidaya inay masuuliyad kasta qaban karaan, markaa in dumarka taa fahman oo wallaalahooda raga ay wax la qaybsadaan.,”ayay tidhi Marwo Foosiya.
Guddoomiyuhu waxay ku dooday in haweenku horumar gaadh siin karaan bulshada waxaanu yidhi “Waanad ka war haysaa horumarka ay Khadra Xaaji Geydh gaadhsiisay Gabiley, inay maanta dumarku fahmaan arrintaa oo xilkaa iyo mid ka sareeyaba ay doontaan, waxaa kale oo ururkan NDB, xooga saarayaa ardayda Jaamacadda oo barigii aanu Jaamacadaha sameynaynay waxaanu u sameynay in ay dadka iyo wadanka wax u qabtaanm manaan fileyn inay suuqa taagnaadaan ama ay joornaalada akhristaa ama daawadaan, Waxaan filayaa in ardayda kaleba ay ku soo biiri doonaan ururkan (NDB) Insha Allaa iyo cid kasta oo rabta inay dadkan iyo dalka uga faa’iideeyaan aqoontooda.”
Guddoomiyaha oo aanu weydiinay siday u aragto xaalada gobolada bari, waxaanay tidhi “Waxaanu anagu NDB ahaan aaminsan nahay in nabadda lagu wada noolaado. Waxaanu taageersan nahay goggoshii uu madaxweynaha Somaliland ku baaqay in ay bilaabaanto oo si dhab ah looga midha dhaliyo NDB-na guddoomiye xigeenkeedu waa nin ka soo jeea gobolka Sool, waxaan qabaa in marka laga reebo ururka SSCD in uu ururka NDB uu yahay ka kali ah ee qof goboladaa u dhashay uu guddoomiye xigeen ka yahay.”
Foosiya waxay sheegtay inay xukuumaddu tashiyo badan ka samayso ka qeyb galka shirka London waxaanay tidhi “Run ahaan aniga fikirka aan ka qabaa waxaa weeye Soomaali dhawr iyo labaatan shir baa Soomaali loo qabtay, waana run in aanay Somaliland midnaba ka qayb gelin. Laakiin waxaan anigu qabaa kol haddii la inaga cadsaday inaynu ka qayb galno, waxaa ilaa fiican in aynu eegno wax Somaliland ugu jira. Waa in loo diraa wefti Wasiirka arrimaha dibadu hoggaaminayo oo yidhaahda maxaad noo haysaan oo shirka ka qeyb gala? oo wixii shirka lagaga hadlo wixii kagaaadanna kaga jawaaba.mana qabo in la yidhaa Somaliland meel uun ha ku xidhnaato oo cidna lala hadli mayo, xukuumaduna waa in ay la tashi ka samayso shirkaasi.”
Previous PostMadaxweyne Ku xigeenka Somaliland Oo Qaabilay Masuuliyiin ka socday Ha’yad Fadhigeedu yahay UK Next PostBaaxadda khasaarihii dagaalkii shalay ka soo gaadhay maleeshiyadii soo weerartay Ciidamada Qaranka